Faha- 90 taona- Tily eto Madagasikara – Tsodrano
Falifaly ho any am-piangonana Photo © Julia Darsot
Fisaorana an’Andriamanitra no voalohany raha afaka milaza fa velona nandritra ny 90 taona ny Tily eto Madagasikara . Noho ny fahasoavany sy ny fitiavany no naha tanteraka izao fankalazana izao. Maro ny olona nifamdimby tamin’ny sampana Tily : ankizy, tanora, lehibe.
Ambatomanga no nandray izany lasy lehibe izany. Toerana manana ny lazany indrindra amin’ny fitaizana. Anisan’izany ny fanomanana mpampianatra sy ny toeram-panomanana mpitandrina « Sekoly pastoraly » alohan’ny hifindran’io eny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato. Misy ao koa ny fampianarana sy famokarana « fromage ». Vao haingana dia niorina ny fiangonana vaovao lehibe.
15000 no isan’ny mpikambana ao amin’ny sampana Tily manerana ny nosy no tonga teny. Nisy teo amin’ny 90 ny avy tany Frantsa .Tsara dia tsara ny fitsinjarana ny toerana hivatanan’ny rehetra . Deraina tokoa ny mpikarakara tamin’izany . Ho an’ny vahiny mitsidika ny lasy dia efa misy toerana hisakafoanana voaomana ny amin’izany. Hita taratra tao koa ny Tily tranainy sasantsany . Mahafinaritra tokoa fa tarehy mirana hatrany no hita.
Samy safononoky ny hafaliana ny rehetra. Ny fanompoam-pivavahana famaranana ny lasy dia natao teo ankalamanjana satria marobe ny olona.
Ny fahitana ireo tanora marobe ireo dia manome hery hijoro amin’ny asan’ny Fiangonana. Miasa ny Fanahy Masina na dia mandalo fotoan-tsarotra aza Madagasikara. Tantara lehibe iray ho an’ny Fiangonana eto Madagasikara iny fotoana iny.
Photo © Julia Darsot
Fiangonana vaovao Ambatomanga-
Falifaly ho any am-piangonana
Tily tranainy miaraka @ mpiandraikitra
Hifarana ny lasy.Veloma mandrapihaona
Mpitsidika ny lasy
Mankany @ toeran-dasy
lasy, Madagasikara, mpampianatra, Tily